Ukukhiqizwa Kwemboni - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
I-Home World Group ingumkhiqizi omkhulu futhi othumela izinto kwamanye amazwe ngepulangwe nemikhiqizo ehlobene nayo eChina, eyasungulwa ngo-1993 nezinkampani ezingaphansi kuka-6. Manje sijabulela imigqa engama-73 yokukhiqizwa kwefilimu i-plywood fancy plywood fancy ne-LVL. Futhi inkampani eyi-12 yamasheya ahlangene ku-OSB, MDF nebhodi le-melamine likhiqiza.
I-ROC International yinkampani yokungenisa nokuthekelisa e-Home World Group.
Ukukhiqiza kwethu kuzo zonke izinhlobo zephaneli yezinkuni kungu-1,000,000m3 unyaka ngamunye. Ifakwe imishini eminingi esezingeni eliphakeme, ama-Italian IMEAS sanders, imishini yokuxebula yaseJapan UROKO, i-Veneer Joint Tenderizers nemishini emikhulu eyomile, inkampani izimisele ukukhiqiza nokuthumela imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu kwifilimu ebhekene neplywood, iplywood enhle, i-plywood ye-antiskid, MDF, OSB nemikhiqizo ye-LVL.
Ebhizinisini lokuthekelisa, imikhiqizo yezinkuni ze-ROCPLEX iqinisekiswe yi-IS09001: 2000, IS014001: 2004, CE, FSC, BFU, JAS-ANZ futhi ithengiswe kahle emazweni angaphezu kwekhulu emhlabeni wonke, njengeGerman, Australia, USA, IChile, iLibya, i-UAE, iSaudi Arabia, iKorea, iJapan, njalonjalo.
Emakethe yase-china yendawo, imalali yomkhiqizo wasekhaya we-ROC odumile esakhiweni sokwakha i-china nasemakethe yokuhlobisa ekhaya.
Ngiwine udumo lwe "Chinese Famous Trademark", "Jiangsu Quality Trusted Products" kanye ne- "AAA Corporate Credit".
Ngenhloso yokuphekela izidingo zemakethe yomhlaba wonke, sibambisene nabathengisi bezimpahla zokwakha abadumile kanye nesitolo esikhulu, sinesibopho sokuklama kanye ne-OEM yepaneli yabo yokhuni nefenisha.
Thekelisa Futhi Ngenisa
Xuzhou Roc International Ukuhweba Co., Ltd.
IZhengquan Wood Co., Ltd.
IZhanpeng Timber Co., Ltd.
ITongshun Wood Co., Ltd.
IZengyin Wood Co., Ltd.
ISenhao Wood Co., Ltd.
Senso Izinto zokwakha co., Ltd.